धुर्मुुसको कट्टुदेखि माग्नेको इस्टकोट खोज्दाका यस्ता छन् रोचक प्रसंग – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > धुर्मुुसको कट्टुदेखि माग्नेको इस्टकोट खोज्दाका यस्ता छन् रोचक प्रसंग
धुर्मुुसको कट्टुदेखि माग्नेको इस्टकोट खोज्दाका यस्ता छन् रोचक प्रसंग
admin April 27, 2018 मनोरञ्जन 0
काठमाडौं, वैशाख १४ – हाँस्य कलाकारिताको जग बसाल्ने कलाकारको रुपमा हेरिन्छ मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई । जोडीलाई हाँस्यव्यङग्यका पितामह पनि भनिन्छ । अहिलेका जति पनि हाँस्य कलाकारहरु छन् ती सबै मह जोडीले खनेको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । मह जोडीले कलाकारिताको सुरुवात देखि नै प्रहसनका विषयवस्तुका साथै पहिरनले पनि दर्शक हँसाउँदै आएका छन् ।
उनीहरु भन्दा पछिल्लो पुस्तामा धेरैजसो कलाकारहरु लगाउने लुगा वा पोशाककै कारण स्थापित भएका छन् । कलाकार केदार घिमिरे टेलिसिरियल ‘मेरी बास्सै’मार्फत माग्ने बुढाको रुपमा चर्चित भए । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनले बीचका केही वर्ष माग्नेको भेषमा दर्शक हँसाउन पाएनन् । तर यसै वर्षदेखि फेरि उनी यही भेषमा दर्शक हँसाउन स्टेजमा उत्रिएका छन् । तर उनको माग्ने बुढाको भेष भने सधैँ एउटै रहन्छ । विशेष गरी उनले लगाउने पहिरन । हामीमध्ये कसैले पनि उनलाई त्यो पोशाक सोच्न र बनाउन कति समय लाग्यो भनेर सोचेका हुँदैनौँ ।
उनले यत्तिका वर्षसम्म एउटै पहिरन लगाएका छन् या फेरिरहेका छन् त्यसको बारेमा पनि हामी जानकार छैनौँ । तर आज हामी तपाईलाई त्यसको जानकारी दिँदैछौँ । यो सामग्रीमा तपाईँले पहिरन अर्थात पोशाकले दर्शक हँसाउने हास्यकलाकारहरुकोे बारेमा जानकारी पाउनु हुनेछ ।
माग्ने बुढाको चरित्र हिट बनाउन उनको दाँतको पनि उत्तिकै भूमिका छ । उनको अगाडि पट्टीको कालो दाँतले पनि दर्शकलाई मनोरन्जन दिएको छ । माग्ने बुढाको लागि ड्रेस तयार पार्दाको पल उनले हामीसँग यसरी सेयर गरेका छन् । ‘माग्ने बुढाको चरित्रको लागि ड्रेस खोज्दाको पल निकै नै रमाइलो छ । माग्ने बुढाको क्यारेक्टर पक्का भएपछि मैले कालिमाटीको तरकारी बजारमा एक जना भरियालाई देखेँ । उहाँलाई मैले नियालेर हेरेँ । मलाई ती भरियाको गेटअप मेरो क्यारेक्टरलाई फिट हुन्छ भन्ने लाग्यो । संकटकालको समय थियो त्यो । यहि कारण होला उहाँले भने मलाई निकै शंकास्पद तरिकाले हेर्नुभयो ।
६०-६२ साल तिरको कुरा हो । मैले ती भरियालाई तपाईँको पुरानो इस्टकोट दिनुस् म नयाँ दिन्छु भने । मैले नयाँ किनेर दिने कुराले उहाँलाई अचम्मित बनायो । यही कारण उहाँ त्यहाँबाट भाग्नुभयो । यसले नयाँमा बमसम फिट गरेर दिन्छ कि भन्ने पीर लागे जस्तो छ उहाँलाई । किन भने त्यो बेलामा कोही पनि मानिसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
पछि रत्नपार्कमा मैले अर्को एकजना भरिया देखेँ । उहाँले लगाएको इस्टकोट मेरो क्यारेक्टरलाई सुहाउँदो थियो । अनि मैले उहाँसँग तीन समय इस्टकोट किने । यसरी फेला पर्यो माग्नेको इस्टकोट । अनि मैले लगाएको सुरुवाल र टोपी भने मैले अरु नाटकका लागि भनेर जम्मा पारेर राखेको लुगाको खातबाट फेला परेको होे ।’
करिअरको सुरुवातमा जब सन्तोष पन्तले केदारलाई काम गर्ने अवसर दिएका थिए उनी धेरै लुगाहरु बोकेर हिँड्थे । किन भने कहिले कस्तो कहिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकाले उनी लुगाहरुको लागि पहिले नै तयार भएर हिँड्थे । घरमा बुवाहरुले काकाहरुले थोत्रा बनाएर फालेका लुगाहरु जम्मा पारेर राखेका थिए केदारले ।
यीनै लुगाहरुमध्येको थियो सुरुवाल र टोपी । ‘मेरी बास्सै’मा काम गर्दासम्म उनले बीचबीचमा यी लुगाहरु परिवर्तन गरेको अनुभव साटे । ‘कहिलेकाही कार्यक्रममा जाँदा क्यारेक्टरको टोपी पनि हराएको छ । छुट्छ के कहिले काही । अनि पछि त्यसलाई ठ्याक्कै त्यस्तै किन्नु परेको छ’, उनले थपे ।
पहिरनका कारण चर्चामा आएका अर्का कलाकार हुन् धुर्मुस । उनले लगाएको कट्टु र इस्टकोटले उनको धुर्मुस पात्रलाई दर्शकले मन पराउने बनाइदिएको हो । विशुद्ध गाउँले पात्र धुर्मुसको अनुहारको भावले पनि धुर्मुस पात्रलाई हाँस्यास्पद बनाएको छ । अर्को पात्र खड्काजीको पनि सधैँ एउटै भेष हुन्छ । सीतारामले धुर्मुसको लागि लुगा कसरी जुटाए त यसमा उनी भन्छन्, ‘मैले धुर्मुस पात्रको लागि ज्याकेट एउटा दाइको मागेँ । अनि कट्टुचाहिँ किनेँ । पहिले पहिले त त्यो किसिमको कट्टु सहजै पाइन्थ्यो । तर पछिपछि त त्यो लोप पो भयो त । मैले १२ वर्षको अवधिमा मैले पाँच वटा जति कट्टु परिवर्तन गरेँ होला अनि धुर्मुसको टोपी पनि पाँचवटा जति नै परिवर्तन गरेँ । मेरो खड्काजी र प्रधानमन्त्रीज्यूको चरित्रले पनि निरन्तरता पायो ।
यी दुईवटा चरित्रको लागि पनि मैले बडो रमाइलो तरिकाले लुगा जम्मा पारेको छु । मैले खड्काजीको चरित्रमा लगाएको लुगा सुरवीर पण्डित दाइको हो । खड्का जीको चरित्रमा लगाउने सुरुवाल चाहिँ । अनि मैले मुस्कान पासाको चरित्रका लागि लगाउने लुगा पल्पसा डंगोल दिदीको हो । अनि मलाई खड्का जीको लागि मेरो त्यो ओठ बनाउने काम मुस्कान डेन्टल क्लिनिकले बनाइदिएको हो । उहाँले मलाई जस्तो भन्यो त्यस्तै गरिदिनुहुन्छ ।’
कलाकार मनोज गजुरेलले विभिन्न व्यक्तिको रुप धारण गरेर दर्शक हँसाउछन् । हालै मात्र उनले सिस्नोपानी नेपालको ‘दुई थोपा हाँसो’ नामक कार्यक्रममा बाबा रामदेव बनेर दर्शक हँसाएर आए । यसका अलावा उनले नेपालका चर्चित राजनेतादेखि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कलसमेत गरेका छन् । मनोज सधैँ एउटै गेटअपमा हुँदैनन् । उनले हरेक व्यक्तिका लागि नयाँ पहिरन बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण उनी ती लुगाहरु केही समय लगाउँछन् र फेरि नयाँ लुगा र नयाँ व्यक्तिको नक्कल गर्ने तयारी गर्छन् ।
‘मेरी बास्सै’ का कलाकार तक्मे बुढाको पहिरन र भेष पनि चर्चामा रहेको थियो । अवकास प्राप्त लाउरेको भूमिकामा रहेका तक्मेले लगाउने तक्मा पनि दर्शकको नजरमा गडेको कुरा हो । तक्मे बुढालाई एक जना आर्मी अफिसर्सले सक्कली तक्मा दिएका थिए । सुरुसुरुमा उनले त्यही लगाए । अनि पछि भने उनले सक्कली तक्माए जस्तै देखिने नक्कली बनाएर लगाउन थाले । उनले लगाउने टोपी उनलाई भक्तपुरमा एक जना बाजेले उपहार दिएका थिए । उनीसँग तक्मे बुढाले लगाउने दुई जोर दौरा सुरुवाल छन् । एउटा जाडोको लागि छ भने अर्को गर्मीको लागि । गर्मीमा लगाउने दौरा सुरवाल उनलाई उनकी कान्छी बहिनीले उपहार दिएकी हुन् । जाडोमा लगाउने एक जना दाइले उपहार दिएको उनले सम्झिए । उनले जाडोमा लगाउने दौरा सुरवाल हातले बुनेको हो ।
अर्का कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले भने मिठाई लाल पात्रको लागि एउटा भेष बनाएका छन् जसलाई उनले निरन्तरता पनि दिएका छन् । तराई मूलको मधेसी पात्रको रुपमा संदीपलाई दर्शकले पनि खुबै रुचाएका छन् । बिगत ५ वगर्ष देखि मिठाईलालको रुपमा प्रस्तुत भएका उनले हरेक श्रृङ्खलामा नयाँ लुगा लगाउने गरेका छन् । उनले यो पात्रको लागि गेटअप तयार गर्न खासै समय नलागेको बताए । किनभने उनी पनि तराईकै भएका कारण एउटा तराईको पात्रको लागि चाहिने गेटअप उनलाई राम्ररी थाहा थियो ।
यही कारण उनलाई यो गेटअप तयार पार्न खासै गाह्रो भएन । पछिल्लो समय विग अर्थात नक्कली कपालमा प्रस्तुत भएका उनले यो विग भने अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको बताए । यस अघि उनले कपाल लुकाउँदै आएका थिए । यसका अलावा पनि सन्दीप अन्य विभिन्न पात्रमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।
‘मेरी बास्सै’का कलाकार बल्छी ध्रुवेको पोशाक पनि दर्शकलाई मन परेको भेष हो । हाफ पाइन्ट, शर्ट र इस्टकोटसँग बोक्ने फून्दु्रङले दर्शकलाई मनोरन्जन दिन्छ ।
मरिचमानले आफ्नो गेटअप तयार पार्न निकै मेहनत गरे । जब उनी ‘मेरी बास्सै’मा खेल्ने पक्का भयो उनी गेटअपको खोजीमा लागे । यही क्रममा उनलाई नजिकै बस्ने अर्जुन वस्तीले एउटा इस्टकोट उपहार स्वरुप दिए । त्यसपछि उनले गाउँका नवीन सुवेदीबाट बल्छीको लागि टोपी पाए । यसका अलावा उनले ९ कक्षामा पढ्दा दाइले किनिदिएको हाफ पाइन्टलाई बल्छीको चरित्रका लागि फाइनल गरे । उनीसँग भएको फुन्द्रुङ उनका बुवाले बुनिदिएका हुन् ।
७ वर्षदेखि बल्छी धु्रवे बनेर हिँडेका उनका दुईवटा इस्टकोट र फुन्द्रुङ फाटिसकेका छन् । उनले अहिले बोकेको फुन्द्रुङ पनि पिँधमा फाटेको छ तर उनले त्यही बोकिरहेका छन् । अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने उनले लगाउने लुगाहरु अटाउने एउटा सानो प्लास्टिकको झोला छ जो सधैँ उनको साथमा हुन्छ । एक पटक काठमाडौंको सुकेधारामा भएको कार्यक्रममा जाँदा झुक्किएर कसैले उनको त्यो ब्याग लगिदियो । तर केही छिनपछि उनले त्यो ब्याग अरुकै हातमा देखे । आफ्नो ब्याग देखेपछि उनले मागी छाडे । किन भने यो उनको लक्की चार्म पनि बनेर रहेको छ ।
कलाकार सुरज चापागाईँ उर्फ बान्द्रेको गेटअप पनि चर्चामा छ । उनलाई पनि दर्शकले गेटअपका कारण बढी चिन्छन् । उता भद्रगोलका कलाकार अर्जुन घिमिरे उर्फ पाँडेको गेटअपको पनि आफ्नै पहिचान छ । यही सिरियलका कलाकार कुमार कट्टेल उर्फ जिग्रीको गेटअप पनि आवारा युवकको गेटअपका रुपमा चर्चित भएको छ ।अर्का कलाकार जोगिन्दर अर्थात शिव शंकर रिजाल पनि तराईको भेषमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । उनको पनि आफ्नै पहिचान छ ।
यसबाहेक केही कलाकारहरु छन् जसले गेटअपबिना पनि दर्शकलाई मनोन्जन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन् । कलाकार जितु नेपाल, दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला,राजा राजेन्द्र पोखरेल दिनेश काफ्ले गेटअपबिना पनि दर्शक हँसाउँदै आएका कलाकारहरु हुन् । यसका अलावा केही कलाकारहरु थेगोले पनि चर्चित भएका छन् । कलाकार शिवहरि पौडेल उर्फ मुखाँ हान्नु जस्तो, किरण केसी उर्फ राता मकै, जितु नेपाल उर्फ मुन्द्रे, सुरेन्द्र केसी उर्फ मुलाको साग, देवीराम पराजुली उर्फ भोक लाग्योलगायतका कलाकारहरु थेगोका कारण चर्चामा छन् ।
फेरि धुर्मुस सुन्तलीले गरे यस्तो उदारणीय काम!
नेपाल प्रहरीका नै तस्करहरूसँग मुसा विरालो खेल्दै गर्दा खुल्यो यस्तो रहस्य!
अभिनेत्री केकी अधिकारी कोरोना संक्रमित
दोस्रो विवाह पनि असफल भएपछि श्वेता तिवारीका पहिलो श्रीमान् राजा चौधरीले गरे श्वेताका बारेमा अ चम्मको खु ला सा